BlogPad - Tifatiraha WordPress ee iPad - Geofumadas
Janaayo, 2014 Apple - Mac, Internet iyo Blogs, aragti ugu horeysay
Ugu dambeyntii waxaan helay tifaftire aan ku qanacsanahay iPad.
In kasta oo ay tahay WordPress barta ugu weyn ee wax lagu qoro, halkaas oo ay ku yaalaan sheylo tayo sare leh iyo fiilooyin, dhibaatada helitaanka tifaftire wanaagsan ayaa had iyo jeer dhibaato ahayd. Wixii desktop wali wax ma heli karo.
Waxaan isku dayay BlogPress, WordPress for iOS, Blog Docs, oo kaliya waxay u yimaadeen inay degaan Blog, inkasta oo aan ku dhammeeyay kan kaliya ee kiisaska xaaladaha degdegga ah sababtoo ah waxay had iyo jeer ku hareereysey samaynta tifaftiraha internetka.
Mid ka mid ah shakiga ugu weyn, waxaan ka helay BlogPad oo waxaan dhihi karaa hubaal, in ay ka dhigto wax walba oo ah fan ku dhisan mashquul ah si ay ganacsi ugu gasho.
Maxaa ka dhigaya BlogPad Pro tifaftiraha ugu fiican WordPress
Waxaa laga yaabaa in xoogga Blogsy uu yahay daciifnimadiisa ugu liidata, maxaa yeelay adoo taageeraya barnaamijyo badan (Blogger, Tumblr, Joomla, TypePad, iwm), waxay ka dhigeysaa feejignaanta isbeddelada badan inay xaddidayaan waxtarka sare. Waxaan xasuustaa inaan ka quustey markasta oo aan cusbooneysiiyo WordPress waxay aheyd inaan wax ka beddelo khad faylka xmlrpc ah, markii aan ka warbixiyona ay fariin ii soo diri doonaan
Halkaas ayay ku leeyihiin tan ayaa xallisa ...
Inaad awood u yeelato inaad isbeddel ku sameysid qaybta soo socota ee codsiga.
BlogPad kaliya wuxuu u shaqeeyaa WordPress, ha ahaato boggaga la martigeliyey ama WordPress.com, marka laga hadlayo xmlrpc ma garanayo sida ay ku sameyn lahaayeen, maxaa yeelay toy-ku wuxuu leeyahay awood sare oo wax lagu raadiyo laguna xalliyo, xitaa haddii ay tahay meel kale. Sidoo kale xaqiiqda ah inay kaliya u tahay WordPress, waxay u fududeysay iyaga inay si dhakhso leh u hirgeliyaan howlaha mudnaanta leh, taas oo aan u sahlaneyn Blogs taasna waa inay isbeddel sameysaa oo ay wax ka qabataa raadinta sida aysan u saameynayn goobaha kale.
Mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee BlogPad waa dareenka guud ee sida loo sameeyo shaqooyinka. Taasi waxay dhibaato ku ahayd Blogsy, oo iyagu qaab waali ah oo ay doonayeen inay wax u riyaaqaan, waxay lahaayeen waxyaabo yaab leh, sida hal guji oo aad ku saxdo sawirrada, ku jiid laba farood si aad uga tagto tifaftiraha garaafka illaa koodhka ... aad bay u fududahay in nuxurka loo jebiyo dhaqaaq xun faraha. Waqtigu wuxuu ka dhigay inay maciinsadaan badhamada iyo marin u fududaanta laakiin taasi waxay u taagan tahay iswaafaqla'aan iyo waqti lumis. Way wanaagsan tahay in wax la cusbooneysiiyo, laakiin isweydaarsiga isticmaaleyaasha "waa isticmaale", illaa iyo inta aysan u baahnayn tilmaamo gacan qabsi ama qarsoon, waa la qadarin doonaa.
Kuwani waa qaar ka mid ah sifooyinka kuwaas oo saddex maalmood ah, waxaan helay inaan jeclahay BlogPad:
Jeegaree jilicsan. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku xirto luqad kale oo hingaad ah luuqad is dhex galka ah, markaad taabato eray qalad ah waxay kor u qaadeysaa xulashada ereyada suurtagalka ah, iyo hubiyaha wuxuu sameeyaa booqasho Microsoft Word u eg, isagoo muujinaya talooyin lagu beddelayo shakhsiga, dhammaan la beddelo oo lagu daro qaamuuska. Waxay taageertaa higgaadinta dhowr luqadood, oo ay ku jiraan Isbaanish, Boortaqiis, Faransiis, Talyaani iyo noocyo kala duwan oo Ingiriis ah.Waxay kaloo taageertaa jilayaasha si aad u wanaagsan, codsiyada kale waxay ku hayaan sumadda sumadaha oo markay doonayaan inay wax ka beddelaan WordPress-ka internetka waxay noqonayaan wax aan macquul ahayn in lala macaamilo, inkasta oo ay si sax ah uga muuqdaan daabacaadda.
Tifatiraha WYSIWYG. Ereygan macnihiisu waa waxaad aragtay waa waxaad heshay, waxaan xasuustaa tan iyo markii ay Windows u timid inay bedesho DOS oo ay raacdo fikradda ah inay ku socoto socodka iyadoon la yaabin marka la daabacayo ama la daabacayo (waxaad aragtay waa waxa aad hesho). badhamada uu yaqaan qofkasta oo adeegsada Microsoft Word: rasaas, tab tab, qaababka font, iskumid, nambarro, iwm.
Laakiin intaa intaa dheer waxaan jeclahay badhanka khadka tooska ah ee aan ku sameynay Alt + soo galista, aad u macquul ah markaan rabno inaanu raacno cutubka cusub ee isla qodobkan; Waxa kale oo uu leeyahay badhan si loo abuuro jadwal aad u muhiim ah.
Markaad dooranaysid erey, xulashooyinka suurtogalka ah waxay ka muuqdaan menu-ka: nuqul, dhejis, geesinimo, qaab, ay ku jiraan qeexitaanka qaamuuska xulashadeenna.
Si aad u abuurto xariiro isku xiran, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka dhex raadsato waxyaabaha ku jira baloogga. Tani waa wax weyn.
Guud ahaan, isticmaalka waa mid aad u wanaagsan; miisaanku wuxuu nadiifiyaa qaabka adoon lahayn inaad dooranaysid dhejis gaar ah, ma aha sababta oo ah mid kale oo aan la qabsan, laakiin maxaa yeelay waa waxa blogger u baahan yahay.
Maamulaha sawirka. Waxaa laga soo galin karaa kiniinka, live live, url, Dropbox ama Google Drive. Laakiin waxa ugu fiican ayaa ah suurtagalnimada in la doorto cabbirka, taas oo looga tagi karo xallin sare oo leh hyperlink ama codsigu u beddelayo cabbirka la doortay. Taageerada isku toosintu waa mid aad u wanaagsan, waa wax ku fashilmay barnaamijyada kale, ma xuma haddii barnaamijku uu ku jiro ka-shaqeynta Clipping ee uusan hadda lahayn.
Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad dooratid sawirka lagu muujinayo. Waxaan xusuustaa in aan doonayo in aan ka tago Live Writter si Microsoft Word ah oo dhibkani uu ku filan yahay in la eryo.
Guud ahaan codsigu aad buu u wanaagsan yahay. Marka laga reebo xakameynta waxyaabaha la soo geliyay, dhinaca menu waxaad ka heli kartaa bogag, sawirro, qeybaha, tags, xitaa ku shaandheyn astaamahan. Waad arki kartaa faallooyinka, wax ka beddeli kartaa, beddeli kartaa xaaladda ama ka jawaabi kartaa; waxqabadka oo ficil ahaan noo siiya waxqabadyo lagu qaban karo oo keliya gelitaanka WordPress ... in kasta oo ay sidoo kale marin u leedahay shaashadda.
Bogagga loogu talagalay martigelinta WordPress.com waxay soo saartaa tirakoobyada Jetpack Plugin. Xusuusnow in tan aan lagu taageerin baloogyada la martigeliyay waxayna abuuri kartaa dhibaato xiriir fog oo leh xmlrpc.php.
Iyo tifaftire ahaan shaqada khadka tooska ah si fiican ayaa looga fikiray. Waa wax xiiso leh sida ay u leedahay xulashooyin gooni ah oo wax looga beddelo nuxurka iyo wax ka beddelka dejimaha, markaa uma baahnid inaad furto gelitaanka si aad u maamusho dhinacyada sida qaybaha, tags, sawirka muuqda, xaaladda daabacaadda, isugeynta, soosaarida, iwm. Isla badhanka isla geeska ayaa marinada ugu badan laga helaa: daabacaan, cusboonaysiiyaan ama ka daabacaan wixii la daabacay, tirtiro oo horay u eegto
Intaa waxa dheer, qaababka ayaa u ballaadhan marka loo eego:
Tirada maaddooyinka la heli karo ee offline,
Joogitaanka baabuurka badbaadsan,
Cabbirka caadiga ah ee maadada multimedia
Tirada sawirada ugu sarreeya,
Gabagabadii, barnaamij weyn. Waxaan bixin lahaa wax ka badan $ 4.99 ee ay igu kacayso haddii aan ogaan lahaa wax kasta oo ay qabato. Ku dhowaad ku filan qoraaga baloog inuu ganacsi galo: qor.
Tag bogga BlogPad Pro
Ka soo qaad ka Apple Store
Post Previous" Hore Koorsooyinka MappingGIS: ugu fiican waxaa jira.
Post Next Waxa la sameeyo haddii iPad la xadoNext »